निशेधाज्ञाले कपिलवस्तुका मुख्य सडकबजार ठप्प, भित्रभित्रै ठाडो उलंघन ! « Mayadevi Online News Portal
निशेधाज्ञाले कपिलवस्तुका मुख्य सडकबजार ठप्प, भित्रभित्रै ठाडो उलंघन !
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७८ मंगलवार १८:५४
कोरोना संक्रमितको संख्याले ग्राफ क्रस गरेपछि कपिलवस्तुमा मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । निशेधाज्ञा सुरु भएसंगै जिल्लाका मुख्य ठाउँहरु ठप्प र सुनसान भएका छन् भने गाउँघरमा निशेधाज्ञाको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिलला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डे, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नवराज अधिकारी अनुगमनमा हिड्दा यस्तो स्थिति देखिएको हो । निशेधाज्ञाको पहिलो दिन आज जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवा, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, चारनम्बर, गोरुसिंगे, पिपरा, ओदारी, बोडगाउँ, बनगाई लगायतका स्थान सुनसान छन् भने जिल्लाका भित्री गाउँबस्तीमा कडाइका साथ पालना नभएको पाइएको प्रहरी उपरिक्षक नवराज अधिकारीले मायादेवीसंग बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार गाउँघरमा अझै पनि ज्यानलाई भन्दा पनि विवाह, व्रतबन्ध, पुजाआजा इत्यादिलाई महत्व दिएका कारण प्रशासनको नियमको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । अधिकारीले यो महामारीमा संस्कृतिभन्दा पनि आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्न जिल्लाबासीमा अनुरोध गर्नुभयो ।
गाउँघरमा अझै पनि जनचेतना नभएको र केहीले कोरोना केही पनि होइन भन्ने मनसायले काम गरेकाले पनि समस्या भएको अधिकारीको भनाई छ । अब भित्री सडकमा पनि सुरक्षाकर्मी आउने र उलंघन पाइए जेल कोच्ने प्रहरीको चेतावनी छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले पनि भित्री गाउँघरमा मानिसले कोरोनालाई मजाकको रुपमा लिएको पाइएको बताउनु भयो । पहिलो दिनको अनुगमनमा जाँदा भित्री गाउँमा यस्तो भेटिएको उहाँले बताउनु भएको हो ।
अत्यावश्यक वस्तु किनमेलका लागि किराना, दुध डेरी, तरकारी, फलफुलका पसललाई बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएको बताउँदै निशेधाज्ञा उलंघन गरी अन्य पसल र ब्यवसाय संचालन गरिएको पाइए शुन्य सशलनिल भएर कारबाही गरिने उहाँको चेतावनी छ ।
अहिले प्रहरीले जिल्लाभर प्रशासनको नियम उलंघन गर्ने सवारी होल्ड गरेर राखेको छ । त्यसमध्ये केहीलाई कारबाही गरिने र केहीलाई स्पष्टिकरण सोधी पठाइने बताइएको छ । नियम उलंघन गरी अनावश्यक रुपमा बाहिर हिँड्ने, मास्क नलगाउनेमाथि पनि कडा कारबाही हुने प्रहरीले बताएको छ । तर पनि भित्रभित्रैका सडकमा नीजि सवारी चलाउने, मान्छे ओसार्ने, पसल बजार खोल्ने क्रम भने रोकिन सकेको छैन ।
प्रशासनले आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्मको लागि निशेधाज्ञा गरेको छ । जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दरले सिमा नाघेकाले यसको फैलावटलाई रोक्न बन्दाबन्दी गरिएको हो । यद्यपी खुला सिमानाका भएकाले बाहिरबाट आउनेको संख्या नरोकिएको भन्दै जिल्लाबासीले सचन्ता ब्यक्त गरेका छन् । सिमानाकामा प्रहरीले हेल्थ डेस्क नै बनाएर चेक जाँच गरेको छ ।
निशेधाज्ञा सुरु भएपछि कृष्णनगर नाकाबाहेक जिल्लाका अन्य नाकाबाट आउने मानिस आउन पाएका छैनन् । तर पनि खुला स्थानबाट भागेर धमाधम समुदायमा मानिसहरु आउने क्रम रोकिन सकेको छैन । यसले गर्दा समुदायमा त्रास कायमै छ ।
यस्तो स्थितिमा भागेर आएकाहरुको तथ्यांकन गरी जाँच बुझ गरेर कम्तिमा पनि १० दिन होम आइसोलेसनमा बस्न सरोकारवालाले सुझाएका छन् । सरकाले पनि यस्ता ठाउँमा पालिकालाई चनाखो भएर काम गर्न आग्रह गरेको छ । सङक्रमणको दोस्रो लहरमा जिल्लामा ज्यान जानेको संख्या जिल्लामा ५२ पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित ७२५ बढी छन् ।